ကမ္ဘာ့မွတ်ဆလင်ခေါင်းဆောင်များမြန်မာမွတ်ဆလင် အရေးဆွေးနွေး၊ World Muslim body to meet on Myanmar violence | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
This entry was posted on April 2, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ရန်ကုန်ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊၄၈လမ်းရှိဆွဒီကီယာ ဟာဖိဇ် အာဂုံဆောင်ကျောင်း မီးရှို့ခံရ ကြောင်းဝေ ဖန်ချက် …	မိတ္ထီလာမြို့အကြမ်းဖက်လူသတ်၊လုယက် မှုကြီးမှာ ကြိုတင် ကြံစည် လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရ … →